Maraoka: Tondradrano Mahatsiravina Tany Tanger · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2017 17:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, Italiano, English
(Marihina fa tamin'ny 26 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nandritra ny taona vitsy lasa izay, niaina haintany i Maraoka. Indrisy anefa fa nifarana tamin'ny oram-batravatra izay niteraka tondradrano mahatsiravina tany avaratr'i Maraoka izany haintany izany. Olona miisa 13 no maty farafahakeliny.
Namoaka lahatsoratra momba ity tondradrano ity ny bilaogy amin'ny teny Anglisy The View From Fez:
Any avaratr'i Maraoka, olona miisa 13 no maty tototry ny tranony nandritra ny tondradrano mahery vaika vokatry ny oram-baratra.
Nanambara ny Minisitry ny Atitany ao Maraoka fa olona miisa iraika ambinifolo no nentin'ny rano tao Driouch, ao amin'ny faritanin'i Nador, ary roa hafa tao Tanger.
Trano miisa 20 teo ho eo no nirodana nandritra ny tondradrano ary mbola misy olona maro hafa no tavela ao anaty rano.
Nandefa lahatsary miisa enina antserasera ny bilaogy A Moro in America izay nalain'ireo mpianatra tao amin'ny lisea ao Tanger:
Dibo-drano ara-bakiteny ny faritra indostrialy sy ny faritra hafa tao an-tanàndehibe avaratra ny alakamisy sy ny zoma. Maro ireo olona maty, indrindra ny vehivavy sy ny ankizy. Herinandro lasa izay, nanome baiko an'ireo Minisitra sy ny governora ny mpanjaka M6 mba tsy hanalavitra ny tanàndehibe voakasika sy hanatrika ny zava-mitranga eny an-toerana. Hatreto anefa dia tsy mbola nisy hita izy ireo.
Ao amin'ity lahatsary manaraka ity, naka sary ireo vahoaka izay niezaka niala ny faritra niaraka tamin'ny rano hatreny an-tenda ireo mpianatra tao amin'ny lisea Abdelkrim Lkhettabi .
Nanome fanampiana an'i Maraoka i Qatar, izay efa nandefa fanampiana ho an'i Yemen voakasiky ny tondradrano ihany koa, araka ny The View from Fez.
Araka ny fangatahan'ny Emir HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, nanapa-kevitra ny handefa fanampiana vonjimaika any amin'ny fanjakan'i Maraoka sy any amin'ny Repoblikan'i Yemen i Qatar, hoy ny nambaran'ny manampahefana iray tao amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny tao amin'ny The View From Fez. Maneho ny firaisankinan'i Qatar miaraka amin'i Yemen sy Maraoka ireo fanapaha-kevitry ny Emir ireo mba hanampiana azy ireo hiatrika ny vokatry ny tondradrano izay namely ny faritanin'i Hadramout ao Yemen sy Oujda ao Maraoka.
Fahalalahàna miteny 12 Oktobra 2021